Soosaarayaasha Mashiinka Tattoo, Alaab-qeybiyeyaal - Warshad Mashiinka Tattoo-ga Shiinaha
Miisaanka saafiga ah: 253g Cabbirka: 142.5mm * 36.5mm (35.3mm qaybta xajinta) Motoor: Mooto yar yar oo aan xad lahayn (17 * 19.8mm) Isdhexgalka: nooca-c interfaceka (USB-C) Xidhmada: Qalinka batari lithium tattoo + kabaha midabka: madow wareeg madow-madow wareeg lacag madow Gear booska: Meel danab booska marsho 5-12V Qaab dhismeedka: Iskuxirka qaab-dhismeedka qalin batari lithium, batariga lithium lagu dhisay, qeybta batteriga waa la rogi karaa lagana saari karaa; Lagu dabaqi karo: 1. Inta badan cirbadaha isku dhafan ee suuqa ku jira (Cabbirka heerka Cheyenne); 2. Ma jiro wax ch ...
Mashiinka Mashiinka Tattoo Copper Mashiinka Qoryaha Mashiinka Tattoo ee Gacmeed Nadiif ah
Qaabka tattoo ee mashiinka tattoo wuxuu ka samaysan yahay naxaas tayo sare leh, goynta silig-koronto iyo CNC la xardhay. Mashiinka tattoo waxaa loo isticmaalaa 12 duub gacmeed gacmeed lagu duubay (silig naxaas ah oo la soo dhoofiyay), waxqabadka sare ee safka iyo Shader. Mashiinka Tattoo ee Shaqeynaya Xasillooni, Xawaare isku mid ah, Khadadka siman, Fudeydka Midabka, Yaraynta Dhaawaca maqaarka. Ku habboon dhammaan noocyada qabashada tattoo iyo cirbadaha tattoo. CON XIRIIRKA SOO SAARKA KOOBARKA Nadiifka ah ee wax lagu shiido oo nadiif ah, daaweynta heerkulka sare, qaabaynta gaarka ah. Naxaas saafi ah ...
MO Premium Tattoo Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xirfadlaha Tattoo Artist
1. Safka & Shader. Si fudud loo maareeyo loona xakameeyo. Iswaafajinta Ballaaran Kula shaqee dhammaan qabashada caadiga ah, tuubooyinka, cirbadaha iyo qalabka korantada ee 6-8V oo leh xarig goos goos ah. 2. Mashiinka Tattoo Mashiinka Tayada Sare oo Lagu Sameeyay Kaarboonka Birta ah ee leh waxtarka ugu sarreeya iyo indha-sarcaad yar, wuxuu u horseedaa xasillooni aad u fiican. Qalabka gacanta, daaweynta heerkulka sare. Kala-baxa kuleylka degdegga ah iyo waxqabadka wanaagsan. 3. Wareegyada 10 Warps Coils, 32mm Height. Silig naxaas ah oo loo yaqaan 'Aeroerobic copper', silig lagu duubay. 4. Armature bar42mm, Bir saafi ah oo jilicsan. Magn magn ...
Mashiinka Mashiinka Tattoo 8 xirmo ee loogu talagalay Bilowga, oo ku habboon xirmooyinka tattoo bilawga ah
CODSIGA: Layn iyo shader labadaba. Ku habboon dhammaan noocyada qabashada iyo cirbadaha Sharaxaada: Ka samaysan zinc alloy, oo ah xirfad adeegsiga mashiinka tattoo, wuxuu u socon karaa si habsami leh oo dhakhso leh. Iyadoo 8 garbo duub iyo waxqabad xasiloon, ay ku shaqeyn karto 6 saacadood oo fidsan oo aan kuleyl lahayn. Labadaba liner iyo shader. Ku habboon dhammaan noocyada kala-qabashada iyo cirbadaha Guga waa mid jilicsan oo sarreeya oo muddo dheer shaqeynaya Tilmaamaha: Magaca Magaca: Mashiinka Tattoo Qalabka Xidhmada: 1pcs x Qalabka Tattoo Qalabka: Zinc Allo ...
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Tattoo ee Fasaxa Heat-ga ee Qalabka Qalabka Tattoo-ga Xirfadeed
Shaqaynta Awoodda leh: Mashiinka Tattoo-gu wuxuu adeegsadaa silig naxaas ah, kaas oo leh habsami koronto oo sarreeya iyo soo-celinta magnetic iyo tayo la isku halleyn karo. Guga waxaa laga sameeyay waxyaabo tayo sare leh oo isku dhafan oo leh dabacsanaan sare iyo adkeysi daal. Bilowga caadiga ah 5V, danab shaqeynaya 7-10v, soo kabasho deggan, magnetism kursiga dambe oo adag. Labo-cirif: Mashiinka Tattoo-ka wuxuu ka samaysan yahay alaabooyin aluminium tayo sare leh leh, gacanna lagu safeeyey, qurux badan oo ammaan ah. Qaabka jirku waa mid aad u gaar ah, oo tayo sare leh ...